Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Kedu ihe akara nzere kredit pụtara?
Nwa amaala US ọ bụla nke jirila nbinye ka Fair Isaac Corporation, ma ọ bụ FICO nyere ya. Otu n'ime edemede dị n'ọkwa ya ka a na -akpọ "kredit ziri ezi". Ọ gụnyere mpaghara 580-669. Ọ bụrụ n ’ileba anya, ị ga -ahụ na ọkwa a dị ala karịa“ ezigbo kredit ”. Ee, ngụkọta ziri ezi abụghị nsonaazụ kacha mma. Kedu ihe kpatara ndị na -azụ ahịa ji enweta ya, kedu ka ị ga -esi kwalite ọkwa ha?
Akara gị bụ ihe ngosi dị mkpa. Ụlọ ọrụ dị iche iche na -eji ya atụnyere ndị na -achọ akwụkwọ dabere na ntozu oke.
Ị nwere ike ijide n'aka na ndị na -agbazinye ego, ụlọ ọrụ ịnshọransị, ndị nwe ụlọ na ndị na -ewe ndị ọrụ na -atụle mkpokọta gị.
Ọ na -emetụta ọtụtụ akụkụ nke ndụ, yabụ ọkwa dị elu na FICO mepere ọtụtụ ọnụ ụzọ.
Kedu ka Akara si arụ ọrụ
Dị ka VantageScore, usoro a dabere na nha site na 300 ruo 850. A na -ekewa nke a n'ọtụtụ ngalaba, yana "ogbenye dara ogbenye" ​​na "mara mma" bu ụzọ "dị mma", "dị oke mma" na "ọpụrụiche". Narị asatọ zuru iji nweta ọnọdụ na ọrụ kacha mma. Ntụle a gbadoro ụkwụ na akụkọ ndị ụlọ ọrụ mba ahụ chịkọtara.
Dabere na ụlọ ọrụ ọkachamara, ihe dị ka 17% nke ụmụ amaala US na -adaba n'ime otu. Ndị na -azụ ahịa a kwesịrị ịkwalite ọnọdụ ha iji chekwaa ego wee bụrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi karịa n'anya ụlọ ọrụ. Enwere ike nweta nke a site na ịrụzi ma ọ bụ rụzigharịa akara ahụ, dabere na izi ezi nke akụkọ ndị ahụ.
Mmezi dabere na arụmụka nkịtị iji wepu ozi na -emebi ụgha. Lelee nke kachasị ọhụrụ nyocha kredit.com na Ebe E Si Nweta ka ịhụ ka nke a si arụ ọrụ. Iwughari na -egosi ịrụ ọrụ na akụkụ dị iche iche nke nyocha FICO, dị ka nha ụgwọ niile. Atụmatụ a dabere na ebumnuche - dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọ nke dị elu akara kredit ịzụta ụgbọ ala.
A na -enyo enyo ndị na -arịọ arịrịọ sitere na ngalaba “mma”. Ọkwa na -emetụta ọnọdụ na nnweta nke ọrụ kredit, ọ bụrụ mbinye ego akpaaka, nnyefe ma ọ bụ kaadị kredit. Ọkwa ọkwa gị n'ọkwa dị elu - ọnụego ọmụrụ nwa dị elu. Ọ bụrụ na ị nweta nkwado, ịgbaziri ego dị ọnụ karịa onye si n'elu.
Uru nke ọtụtụ akara
Ibili na sistemụ dị mkpa maka ọdịnihu ego gị. Mmelite na -amasị ọtụtụ nde mmadụ. Lee ụfọdụ uru.
Ọnụ ọmụrụ nwa n'ụdị ọrụ dị iche iche ga -adị ala, nke pụtara na ịgbaziri ego ga -adị ọnụ ala.
Site na ọnụego dị ala na -abịa ịkwụ ụgwọ dị ala. Imezu ibu ọrụ kwa ọnwa ga -adị mfe.
Ị ga -emepe ọnọdụ ka mma na kaadị, gụnyere mmasị efu, azụmahịa na ụgwọ ọrụ.
Ịkwụ ụgwọ ụlọ ma ọ bụ ụlọ ga -adị mfe karị, ebe ndị nwe ụlọ ga -ahụta gị dị ka onye nwe ụlọ nwere ọrụ.
Ihe kpatara akara ji ada
Dika ngụkọta sitere na akụkọ a, kedu ihe na -emetụta ya? Usoro FICO tụlere akụkụ ise nke omume ịgbaziri ego. Onye ọ bụla n'ime ha nwere mmetụta pụrụ iche n'ọkwa gị. Nke a bụ mmebi:
ịkwụ ụgwọ mbụ (35%);
mkpokọta ego eji (30%);
afọ nke ihe ndekọ (15%);
akaụntụ ọhụrụ (10%);
ngwakọta kredit (10%).
Rịba ama na ụzọ ntule dị iche iche dabere na ihe dị iche iche, n'agbanyeghị FICO na VantageScore yiri ibe ha. Ọtụtụ, a na -ahụ mkpokọta na -adịghị mma n'ihi mmefu ego adịghị mma. Ọmụmaatụ:
Ị nwere ike hapụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ n'oge gara aga. Nke a bụ ụdị ozi kacha emebi emebi, ebe ọ na -akọwa oke nke akara ahụ. Dị ka a na -achị, ndị na -agbazinye ego na -ekwupụta ịkwụ ụgwọ mbubreyo ụbọchị 30 mgbe ụbọchị ruru.
N'ikpeazụ, enweghị ike ịkwụ ụgwọ ga -esi na mkpokọta, ndapụta, enweghị ego, na ikpe obodo, nke na -emebi ngụkọta afọ asaa (Isi nke 7 enweghị ego na -adịgide ruo afọ 7).
O nwere ike ịbụ na ị na -emebiga ihe ókè. Ịbawanye kaadị kredit bụ echiche jọgburu onwe ya, ebe ọ na -eweta oke ojiji ya na 100%. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọkachamara na -atụ aro iji ihe karịrị 10% nke oke gị niile.
Ọ bụrụ na ị nwere obere ahụmịhe na kredit, akụkọ ihe mere eme gị pere mpe.
Ndị na -agbazinye ego na -eji naanị otu ma ọ bụ ụdị ọrụ abụọ nwere ngwakọta kredit na -adịghị mma. Ihe a, nke na -ahụ maka 10% nke nsonaazụ, na -egosipụta ike gị ijikwa ụdị ọrụ dị iche iche.
Ọ pụrụ ịbụ na i nweela ụgwọ dị ukwuu.
Ị nwere ike tinyela ọtụtụ ngwa n'ime obere oge. A na -anabata ịzụ ahịa ọnụego, mana ịrịọ maka ịgbazinye ego dị iche iche nwere mmetụta adịghị mma, ebe ọ na -eme ka ị dị ka onye na -achọ ego.
Kedu ka m ga -esi meziwanye akara kredit m?
Ọ bụrụ na akara gị adaala n'ụzọ na -ezighi ezi, mezie njehie mkpesa n'onwe gị ma ọ bụ were ndị ọkachamara n'ọrụ. Mmezi dabere na iwu nke Fair Credit Reporting Act, nke na -amanye ụlọ ọrụ iwepụ ozi ọ bụla ha na -enweghị ike ịchọpụta. Iji mepee esemokwu, ịkwesịrị ịchọta ihe akaebe ma detuo akwụkwọ iji kwado nkwupụta gị. A template dị na webụsaịtị The Consumer Financial Protection Bureau.
N'aka nke ọzọ, chọta ụlọ nrụzi na steeti gị. Ndị ọkachamara ga -ahụ ihe na -adabaghị n'ihe ndekọ gị, kwadebe ihe akaebe wee rụrịta ụka gbasara ha n'aha gị. Nke a na -azọpụta oge, ebe ọ bụ na ịkwesighi ịgagharị n'iwu ma ọ bụ mee akwụkwọ ozi. Akwụkwọ ozi esemokwu ọ bụla na -ebido nyocha nke dị n'ime ụbọchị 30. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anabatara mgbanwe ndị a, ị ga -enweta akwụkwọ nke akụkọ emegharịrị n'efu.
Mgbe akara ngosi ziri ezi, ọ nweghị ihe a ga -edozi. Kama, lelee usoro ịgbazinye ego ka ị hụ ihe dị na FICO nke na -agbada mkpokọta ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị belata itinye n'ọrụ site n'ịkwụ ụgwọ ụfọdụ, ịgbatị oke, ịnweta kaadị ọhụrụ, ma ọ bụ bụrụ onye ọrụ enyere ikike. Nke nta nke nta, ọnọdụ gị ga -aka mma, na -emepe ọnọdụ ka mma maka ụdị ọrụ dị iche iche.